Kiruna waxeey degmada banaaneed ku tahay habhab badan oo kala duwan. Bulshadooyinka kale waxeey taarikhdooda ku bilaawdeen sidii miro weey soo biqladeen, kadibna weey koreen. Laakin Kiruna waxaa lagu abuuray dhul cidla ah ku dhawaad 120 sano ka hor. Waxeeyna martaay heer tacbiir badan iyo aqoon. Waxeey uu kortay si weeyn. Halkaan meelaha iftiinka waa ugu sii badan yahay, qabooyga waa ku sii badan yahay, dhulka wuu ka sii weeynahay, meelaha sare waa ka sii sareeyaan, meesha ee degmada ku taalnaa meel iswiidhan uga sii koreeyso dhul ahaan ma jirto.
El gaar ah oo duwanaansho badan, halkaasi oo qoraxda afar iyo labaatan saac iftimeeyso 50 maalmood markii lagu jiro xilliga xagaaga, laga bilaaba dhamaadka bisha maayo ilaa dhexbartanka bisha luuliyo ayadoo ee san qoraxda marba hoos marin xariiqda dhulka iyo xirka. Mudada jilaalka waxeey lee dahay habeeno-cirf oo dhan 20 habeen iyo maalin, laga bilaaba 12 disimbar ilaa 31 disimabar. Markaasi qoraxda ma soo kormari karto xariqda dhulka iyo cirka. Kiruna waa meel sadax luuqad looga hadlo, halkaan dhaqanka iswiidhiska, saamiga iyo tornedalska ee isla wada nool yihiin. Kiruna waxeey dhinaca waqooyiga xudud la lee dahay Norge, dhinaca barigana dalka Finland, sidaas ayee xuduud ku tahay.
MeXaalada dhaqaale ee sareeyso awgeed ayaa guri la’aan ka jirta meesha. Dadka badan oo dalka ku cusub gurigooda koobad waxeey ka helaan tulooyinka Svappavaara iyo Vittangi. Masaafada uu dhaxeeyso Kiruna iyo Svappavaara waa 40 kilomitir, Vittangi waa 70 kilomitir. Warbixin kale oo ku saabsan degaan iyo si aad iskaga diiwaan galiso safka guriyaasha, booqo bogga Kirunabostäder.
Kiruna ilaa ee magalaada dhalatay waxaa looga hadlaa iswiidhish, af sami iyo afka tornedalsfinish.
Ayadoo leh ku dhawaad 400 ururo oo diwaangalsan, Kiruna waa degmada iswiidhan ugu urur badan. Waxeey taajir ka tahay soo bandhigyada ururada isboortiga iyo dhaqanka. Halkaan waxaa jiro ururka dineed ee masiixiga, uroro dineed sidii shuhud yaho iyo Kaniisada-Xurka. Kiruna ma lahan masaajid, dadka muslimiinta ah waxeey iskugu tagaan guriga ama meel ku meel gaar ah. Diiwaanka-ururada waxaad ka arki kartaa ururyada jiro.
Dexbartanka Kiruna dukaamo in ku filan ayaa ku yaalo. Waxaa uu dheer labo dukaan oo gacan labaad gado iyo carwo weeyn. Maadama ee xaalada dhaqaale sareeyso dukaamo badan ayaa meesha ka asaasmay. Sido kale uu dhawaanshaha Noorweey iyo Finland waxeey Kiruna ka dhigeeysaa meel soo jidaasho leh.
Adeega bulshada oo dhan sidii Xafiiska shaqada, qasnada ceeymiska iyo xafiiska canshuuraha waxeey dabcan ku yaaliin Kiruna. Svappavaara waxaa ku yaalo dugsi hoose, dukan, xafiiska boostada iyo goobta xiliga firaaqada. Vittangi waxaa ku yaalo dugsi hoose, maktabad, dukan, rugta caafimadka boostada iyo xafiiska shaqada iyo goobta xiliga firaaqada.
Kiruna waxeey lee dahay saf gaaban ee loo galo xanaanada caruurta (ku dhawaad 6 bilood). Laakin tuulooyinka Svappavaara iyo Vittangi safkooda waa ku dhawaad 2 isbuuc. Xanaanada caruurta heerkaada waxbarasho waa mid sareeyo, ayadoo leh hab-dhig gaar ah oo loogu tala galay caruurta dalka ku cusub, markii loo baahdo dadaal dheeraad ah ayaa loo fidiyaa caruurta dalka ku cusub si ee uu helaan tageeraha ee uu baahan yihiin. Warbixin kale oo ku saabsan xanaanada caruurta iyo dugsiga hoose waxaad ka heleeysaa bogga degmada.
Dugsiyaal hoose waxeey ku yaaliin Kiruna, Vittangi iyo Svappavaara. Sido kale Kiruna waxaa ku taalo xarunta-luuqada oo leh fasal diyaaris ah oo loogu talo galay ardayda oo waxbarashad luuqada iswiidhiska ka maqan tahay.
Waxbarashada dugsiga sare waxaa kala wado Ururka degmada Lappland oo ka kooban Jokkbokk, Gällivare, Pajala iyo Kiruna. Dugsiga sare Lappland waxaa la asaasay 2010, waxuuna lee yahay soo waxbarasho badan oo tayo sare leh. Afarta iskuul waxeey lee yihiin ku dhawaad 20 barnaamij ee dugsi sare. Iskuulka waxuu lee yahay barnaamijyada guud, kuwa shakhsi ahaanta ah, kuwa gaarka ah iyo kuwa qarnka iyo dugsi sare oo gaar ah oo ku yaalo xaafad kasto. Waxeey kala wadan sido kale barnaamijka caanka ah ee farsamada-warshada ayado la wada shaqeeynaayo LKAB.
Sido kale Kiruna waxeey lee dahay dugsiyaal madaxbanaan oo leh jiheeyn kala duwan, tusaale ahaan dugsiga Frilufts, dugsiga sare Rymd iyo dugsi sare ee waxbarashada shaqooyinka gacmaha laga qabto ee ka mid tahay shaqada balbaayeeriga iyo waxbarashada shaqada oo qasabaha guriyaha guriga galiyo.
Ardayda dugsiga sare ee Svappavaara iyo Vittangi waxeey maalintii raacaan baska iskuulka oo ku tagaan Kiruna C, sido kale aye sameeysaan ardayda SFI iyo waxbarshada bulshada.
Xarunta waxbarashada Lappland waxeey ka shaqeeyaan waxbarasho ku xiran sida ee dadka waa weeyn uu soo dalbadeen, waxeeyna taasi kala socotaa ayadoo wada hadal dhaw lala yeesha jawiga-shaqada ee gobolka iyo wadashaqeeynta shirkadaha iyo hey’addaha oo lagal wadashaqeeyo qorsheeynta iyo gudogalinta waxbarashada. Xarunta-waxbarshada waxeey qabqaabisaa waxbarasho loogu tala galay dadka waa weeyn ee asaasiga iyo gaarka ah, SFI, dugsiga sare iyo heerka waxbarashada shaqada ee sare. Waxa ee soo bandhigaan waxaa ka mid ah waxbarshada xanaaneeynta, waxbarashada dadka waa weeyn ee shaqada oo leh iswiidhishka-shaqada oo loo habooneeysiiyaya dadka dalka ku cusub iyo waxbarasho badan oo ku socoto baahida warshada godka macdanta lagala soo baxo. Waxeey la shaqeeyaan Jaamacada farsamada Luleå, Jaamacada Umeå iyo isku duwayaasha waxbarashada si markaai loo soo bandhigo waxbarsho tayo sare leh iyo heerar kala duwan.
Dugsi dadka waa weeyn Malmfältens waa waxbarasho kale oo dadka waa weeyn dooran karaan, waxeey lee dahay koorso guud iyo barnaamijka-soo galooytiga oo soo bandhigaayo iswiidhish iyo iswiidhishka alifka looga bilabaayo.
Kiruna waxa ku yaalo isbitaal, rug caafimaad, rugta caafimaadka hooyoyinka, qaabilaada dhalinyarada, rugta caafimaadka caruurta, qaabilaada degdega iyo daryeelka ilkaha. Vittangi waxaa ku taalo rug caafimaad. Warbixin kale waxaad ka heleeysaa Maamulka gobolka Norrbotten.
Fursad lagu helo caawinaad-turjumaan waa jirtaa markii lala xariiraayo hey’addaha dowlada. Turjumaanka waxaa marka koobad laga helaa telefoon.
Kiruna weey lee dahay xariir duulimaad, tareen iyo bas. Waxeey qaadaneeysaan Stockholm in loo duulo hal saac iyo xoogaa. Tareenkana waxuu ku geeynaa dhinaca waqooyiga iyo koonfurtaba. Tuulooyinka iyo dhinaca hoose ee xeebta waxaa loo raaci karaa bas. Diyaarada iyo tareenka waa lee yihiin Jadwalka-socodka. Sido kale jawdal loogu tala galay Gaadiidka-gobolka iyo basaska-xafadeedka jadwalkooda.
Maanta Norrbotten oo dhan waa gobol sii weeynanaayo, Kiruna waxeey ku jirtaa xaalad dhaqaale oo sareeyso, dad badan oo dalka ku cusub ayaa shaqo helay waqtigii danbe, gaar ahan shaqooyinka farsamada iyo daryeelka, xaalada dhaqaale ee sareeyso waxeey sido kale soo jiideeysaa baahi-shaqaaleeynta shaqaalaha adeega, ganacsiga iyo adeega uu dhow.
Kiruna waxeey lee dahay godka macdanta laga soo saaro oo aduunka uu weeyn, ganacsiga macdanta la soo saaro waa degmada nooleedkeeda. Magaalada waxeey hada ku jirtaa xaalad gaar ah ayadoo ee macdanta birta qeeybeeda badan ee hoos marto magaalada bartamaheeda, maamulka degmadana iyo shirkada macdan bixinta go’aan ku gaareen in soo saarida ee muhiim uu tahay badbaadada degmada ayadoo lagu qasban yahay in magaalada la raro.
Sido kale LKAB ayaa si degdeg ah uu fureeyso sadax god macdan laga soo saaro gudaha Kiruna iyo Svappavaara sanadooyinka soo socdo. Todobo shirkado oo ajnabi ah, shirkado yar ee meesha laga lee yahay iyo shakhsiyaal gaar ah ayaa wado qorsheeynta iyo tijaabinta qodka macdanta gudaha Kiruna.
Xaalada dhaqaale ee sareeyso iyo badalka-magaalada waxeey keeneeysaa in hamiga laamaha kale uu kor uu kaco, goobaha ganacsiga iyo maqaayadahana asaaskooda ayaa badanooyo. Sido kale waxaa badanooyo ganacsiga-booqashada, waxaana la maalgalinooyaa ganacsiga-dalxiiska ee buuraha. Waxaa uu sii dheer in dad badan howl gab ka noqonayaan degmada gaar ahaan daryeelka, xanaaneeynta iyo iskuulada. Shaqolaantii kor uu kacsaneed weey dagtay, waana meesha ee shaqo la’aanta dalka dhan uga yar tahay.
Isla maantaba baahi loo qabo shaqaale ayaa jirto, baahidana waa badan doontaa sababtoo gobolka oo dhan kor ayuu uu socdaa taasi oo keeneeyso in shaqooyinka lagu tartamo. Si loo dabaro masruufta-shaqeeynta waxaa loo baahan yahay in uu soo guurka degmada uu bato iyo shaqaale soo galooyti oo shaqo oo yimid dalka. Jabinta macdanta iyo shaqooyinka ka soo baxo waa kuwa degmada ugu badan laakin maamulka degmada waxeey goor dheer tageeraayeen hormarinta goobta sadax meel ”lug”, hawada sare iyo bey’adda halkaasi ee waxbarasho iyo baaris degmada ka wado goobahaan (Esrange, IRV iyo Tarafala goobta-baarista) iyo goobta dalxiiska halkaasi ee shirkado weeyn ka asaasan yihiin (tusaale ahaan Icehotel iyo dhismo-buur). Dalxiiska iyo nadaafada waa labada goob-ganacsi ee ugu weeyn tuulooyinka.
IVA - sjuksköterska till Kiruna Intensivvårdssjuksköterska
Enhetschefer äldreomsorg östra inom Socialförvaltningen. Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Chef Systems Engineering Services East Civilingenjör, teknisk fysik
Översättare till SVT Sápmi för vikariat Översättare
Restaurangbiträde Frasses Restaurangbiträde
Sport - och eventchef till Lapland Resorts AB Sportchef
Medarbetare på Burger King Restaurangbiträde
Arbetsledare på Burger King Restaurangbiträde
Ekonom till ekonomiavdelningen Förvaltningsekonom
Airport Officers till Kiruna Airport under höst - och vintersäsongen 20 ... Flygplatsman/Ramppersonal
Enhetschef till Socialförvaltningen Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Extrajobba som Mystery Shopper i Kiruna i höst Intervjuare, opinionsundersökning
Sjuksyrra AB söker en IVA sköterska till Kiruna. Intensivvårdssjuksköterska
Butikssäljare / Slangmontör i Kiruna Butikssäljare, fackhandel
Förskollärare till Hjalmar Lundbohms förskola , vikariat Lärare i förskola/Förskollärare
Personliga assistenter sökes till Kiruna Personlig assistent
Lokalvårdare till Björkliden Städare/Lokalvårdare
Restaurangpersonal till Restaurang Lämmeln i Kirunas nya stadshus Restaurangbiträde
Bogga 1 ee ka mid ah 7
ca 23 000
19 447 km2
Luleå ca 350 km
Narvik, Norge 170 km